जापान छोडेर म्याग्दीमा १ करोड लगानी गरि भैंसी पाल्दै श्रेष्ठ – Info Bazar
जापान छोडेर म्याग्दीमा १ करोड लगानी गरि भैंसी पाल्दै श्रेष्ठ
February 20, 2020by Info Baazaar0 comments
म्याग्दी- जापान ! हजारौं नेपाली युवाहरुको सपनाको देश । लाखौं खर्च गरेर रोजगारीका लागि जापान जान मरिहत्ते गर्ने नेपाली युवाहरुको भिडमा यहाँका एकजना युवाले जापानको गतिलो नोकरी छोडेर म्याग्दीको बेनी नगरपालिका– १ रत्नेचौरमा रू. १ करोड बढीको लगानीमा पशुपालन गर्न शुरु गरेका छन् ।
This Page Total Views: 997
डेरी उद्योगमा आगलागि हुँदा ७० लाख माथिको क्षति